YANDEX BROWSER ကိုအတွက်ထပ်တူတက်ချိန်ညှိခြင်း - YANDEX - 2019
Yandex Browser ကိုအတွက်ထပ်တူကို set up လုပ်နည်း
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်အသုံးပြုသူအသစ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီအသစ်ဖန်တီးအကောင့်အလိုအလျောက်သက်သက်သာတစ်ဦးချင်းစီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဖို့တာဝန်သည်အရာ, အချင်းချင်း Alia သည် default အကွန်ယက်ကိုအဆုံးအသုံးပြုသူဝဘ်စာမျက်နှာလိပ်စာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သို့သော်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သယံဇာတပါတီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌ soulless နံပါတ်များကို၏အစုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကလောင်အမည်ကိုပြောင်းလဲလိုပေမည်။
စာမကျြနှာ VKontakte ၏လိပ်စာကိုပြောင်းလဲ
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အကောင့် VC ၏လိပ်စာကိုပြောင်းလဲအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့။ လူမှုကွန်ယက်၏ developer များမဆို user အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးပါပြီ။ သင့်အကောင့်လင့်ခ်၏အခြားအဆုံး Create နိုင်ပါတယ်နှင့် site ၏အပြည့်အဝဗားရှင်းနဲ့ Android နှင့် iOS ပလက်ဖောင်း apps များ။ ကြိုတင်မှန်းဆမမြင်နိုင်အခက်အခဲများ, ငါတို့မထသငျ့သညျ။
ပထမဦးစွာသင်ဝက်ဘ်ဆိုက် VKontakte အပြည့်အဝဗားရှင်းအတွက်သင့်အကောင့်များအတွက်လိပ်စာပြောင်းလဲနိုင်သည်ဘယ်မှာကြည့်ကြကုန်အံ့။ ဒီမှာလိုအပ်သောအပြင်အဆင်များကိုရှာဖွေ Long ကပဲ, ရန်ရှိသည်အနည်းငယ် mouse ကိုကလစ်, ကြှနျုပျတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
မည်သည့် web browser ကိုခုနှစ်တွင်ဆိုက် VKontakte, အသုံးပြုသူ authentication ကိုဖြတ်သန်းသွားကာကိုယ်ရေးကိုယ်တာပရိုဖိုင်းကိုရိုက်ထည့်ဖွင့်လှစ်။
အထက်ညာဖက်ထောင့်ရှိကိုယ်ပွားမှလာမယ့်သေးငယ်တဲ့မြှားအိုင်ကွန်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အကောင့် menu ကိုထုတ်ဖော်။ အမှတ်ကိုရွေးချယ်ပါ "Settings" ကို.
အိမ် tab ကိုအပေါ်ကိုနောက် window ထဲမှာ "စုစုပေါင်း" အပိုင်း "စာမျက်နှာလိပ်စာ" ကျနော်တို့လက်ရှိတန်ဖိုးကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်က "ပြောင်းလဲခြင်း".
ယခုငါတို့ထလာနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်တွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာရန်သင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌အသစ်သော link ကို၏တပ်မက်လိုချင်သောအဆုံးရိုက်ထည့်ပါ။ ဤသည်မှာစကားလုံးထက်ပိုငါးခုအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များထားရှိရေးရမည်ဖြစ်သည်။ underscore ဇာတ်ကောင်များ၏ကျူးကျော်။ အဆိုပါစနစ်အားအလိုအလြောကျထူးခြားမှုများနှင့်ခလုတ်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ပေါ်လတ်ဆတ်တဲ့နာမအဘို့စစ်ဆေးနေ "လိပ်စာပါ", Safely ကဖျောအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပြတင်းပေါက် action ကိုအတည်ပြုရှိပါသည်။ သငျသညျအပြောင်းအလဲလုပ်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေမထားဘူးဆိုရင်, ထို icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်း "ဟုအဆိုပါ code တွေကို Get".
သင်မှတ်ပုံတင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းသတ်မှတ်ထားသည့်ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်, အပေါ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါးဂဏန်းစကားဝှက်နဲ့ SMS ကိုလာပါတယ်။ ကျနော်တို့လိုင်းထဲမှာစုဆောင်း "အတည်ပြုချက်ကုဒ်" နှင့်အိုင်ကွန်ကိုင်တွယ်အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြီးစီး "ကုဒ် Send".
Done! VKontakte အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာလိပ်စာ။
Method ကို 2: မိုဘိုင်း application ကို
Android နှင့် iOS အပျေါအခွခေံမိုဘိုင်း device များအတွက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်, သင်သည်အခြားသယံဇာတအသုံးပြုသူများကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်, သင်၏အကောင့်လင့်ခ်၏အဆုံးအဖြစ်အရာအားဝတျပွုပါမညျသောဒါခေါ်နာမည်အတိုကောက်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းနည်းနှင့် VKontakte ။ သဘာဝကျကျ, အင်တာဖေ့ဒီမှာအမှန်တကယ်လူမှုကွန်ယက် site မှကွာခြားပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်း settings ကို၏ခြယ်လှယ်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်။
မိမိအမိုဘိုင်း device ကို VKontakte လျှောက်လွှာအပေါ်ကို run ။ သင့်လျော်သောလယ်ကွင်းထဲမှာ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပရိုဖိုင်းသို့ရ။
သုံးအလျားလိုက်ဘားနှင့်အတူခလုတ်ကိုမျက်နှာပြင်ကလစ်၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာနှင့်တိုးချဲ့အကောင့် menu ကိုပြောင်းရွှေ့။
အခုတော့ဂီယာ၏ပုံစံအတွက်စာမျက်နှာ Tapan အိုင်ကွန်ရဲ့ထိပ်မှာ settings အမျိုးမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်း၏အပိုင်းကိုသွားပါ။
လာမယ့် window တွင်ငါတို့သည်အချို့သောအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အသုံးပြုသူအကောင့်အတွက် configuration အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။
လိုင်းပေါ်ကလစ်ကျူးလွန် "က Short အမည်" သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို VC ကိုလက်ရှိလိပ်စာမှအပြောင်းအလဲများ။
ရေတိုနာမ၌လူမှုကွန်ယက်ကိုဆိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အသုံးပြုပုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအားဖြင့်လိုက်နာသစ်အမည်ပြောင်၎င်း၏ဗားရှင်းရေးပါ။ စနစ်ကြောင့်သတင်းပေးပို့လာတဲ့အခါ "အမည်အခမဲ့", 'check box' အပေါ် Tapan အတည်ပြုချက်စာမျက်နှာအပြောင်းအလဲများကိုသှားဖို့။
စနစ်အကောင့်တစ်ခုမှချည်ထားသောဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်မှကြွလာသောကုဒ်နှင့်အတူတစ်ဦးအခမဲ့ SMS ကို Querying ။ ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာလယ်ပြင်၌ရှိသောကိန်းဂဏန်းများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်။
ကျနော်တို့အတူတူထူထောင်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်းရိုးရှင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာ VKontakte ၏ကွန်ယက်လိပ်စာပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလူမှုရေးကွန်ယက် site ၏အပြည့်အဝဗားရှင်းအဖြစ်မိုဘိုင်း application များအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင်ချင်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့်နာမည်အသစ်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပိုမိုမှတ်မိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပျော်စရာအများကြီး!
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ငါဘယ်လို link ကို VKontakte ကွန်ပျူတာကူးယူကြဘူး